Yan Aung: ဘာတွေလဲဗျို့…
အဲဒီအတွက် လွယ်ပါတယ်ဗျ။ ကိုရန်အောင်လဲ သေနတ်တလက်သာ ၀ယ်ထားလိုက်. :D ရည်းစားမရှိလို့ သေနတ်သံကြားရင် အထီးကျန်စိတ်နဲ့ ထိတ်လန့်နေတာလား။ ဒါလဲ လွယ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ အမည်းမတွေ တပုံကြီး :P စတာပါဗျာ။ :)
ဘာအမည်းတွေ ပုံနေတာလဲ ကိုကြီးစေးထူးရေ.. ရှင်းအောင် ပြောမှပေါ့. သေနတ်လည်း ၀ယ်မလို့ပဲဗျ. ကိုမင်းမောင်ဆီက ၀ယ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ. သူက အခွန်တွေ ပြန်အမ်းမယ် ပြောနေတယ်လေ. ဟားဟားဟား